ဆာရာယေဗိုမြို့ (အင်္ဂလိပ်: Sarajevo၊ /ˌsærəˈjeɪvoʊ/၊ SARR-ə-YAY-voh၊ Bosnian pronunciation: [sǎrajeʋo] ( ))သည် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ (Bosnia and Herzegovina) ၏ အကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်၊ မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နမိတ်အတွင်း၌ ၂၀၁၃ သန်း​ခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၂၇၅,၅၂၄ နေထိုင်သည်။ ဆာရာယေဗိုခရိုင်(Canton)၊ အရှေ့ ဆာရာယေဗို နှင့် အနီးအနားရှိ မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများအပါအ၀င် ဆာရာယေဗိုမြို့ပြဧရိယာ (metropolitan area)အတွင်း နေထိုင်သူ ၅၅၅,၂၁၀ နေထိုင်သည်။ ဒစ်နယ်ရစ်က် အယ်လ်ပ် ( Dinaric Alps) တောင်တန်းများ ဝန်းရံထားသော မစ်လယက်စကာ (Miljacka) မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ဆာရာယေဗိုတောင်ကြားဒေသအတွင်း တည်ရှိပြီး ဘော်လကန်ဒေသ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။
အပေါ်မှအောက်သို့၊ ဘယ်မှညာသို့။ ဆာရာယေဗိုမြို့ မြင်ကွင်းကျယ်၊ Baščaršija ဗလီနောက်ခံနှင့် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Sebilj အလှရေပန်းကို တွေ့ရပုံ၊ ဆာရာယေဗို ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး၊ ရှေးရိုး ခရစ်ယာန် အသင်းတော်၏ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး (Orthodox Cathedral)၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား နိုင်ငံတော်နှင့် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် (Vijećnica)၊ ဆာရာယေဗို ကေဘယ်လ်ကား။
နာမည်ပြောင်(များ): "ဥရောပ၏ ဂျေရုဆလင်မြို့", "Jerusalem of the Balkans", "Šeher, Rajvosa"
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ဥရောပ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ဆာရာယေဗို တည်နေရာပြ မြေပုံ
ကိုဩဒိနိတ်: 43°52′N 18°25′E
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ဖက်ဒရေးရှင်း
၁၄၁.၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၅၄.၆ စတုရန်းမိုင်)
၄၁၉.၁၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၆၁.၈၄ စတုရန်းမိုင်)
၃၃၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၂၉၀ စတုရန်းမိုင်)
၅၅၀ မီတာ (၁၈၀၀ ပေ)
လူဦးရေ (၂၀၁၃ သန်း​ခေါင်စာရင်း)
ဆာရာယေဗိုသည် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားဒေသ၏ နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီး၊ ဘော်လကန်ဒေသ၏ ထင်ရှားသော ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေး၊ ရုပ်သံစာနယ်ဇင်း၊ ဖက်ရှင်နှင့် အနုပညာဧရိယာများတွင် ဒေသတစ်ခုလုံးအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုရှိသောနေရာ ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရောင်အသွေးစုံထူးခြားမှု (diversity) တို့တွင် ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းကြောင့် ဆာရာယေဗိုအား တစ်ခါတစ်ရံ "ဥရောပ၏ ဂျေရုဆလင်" သို့မဟုတ် "ဘော်လကန်ဒေသ၏ ဂျေရုဆလင်" ဟုခေါ်ကြသည်။ ၎င်းသည် ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းတွင် ဗလီ၊ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း၊ ရှေးရိုး ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း (Orthodox church) နှင့် ရဟူဒီဘုရားကျောင်း (synagogue) အားလုံးတို့ကိုတွေ့နိုင်သော ဥရောပ အဓိကမြို့ကြီးအချို့မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသ၏ပညာရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုအချက်အချာမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဆာရာယေဗိုတက္ကသိုလ် (University of Sarajevo) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ဘော်လကန်ဒေသ၏ ပထမဆုံး အစ္စလာမ် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်း တည်ရှိသောမြို့လည်း ဖြစ်သည်။
Veliki ပန်းခြံမှ ဆာရာယေဗို ဆောင်းဦးမြင်ကွင်း
Sarajevo အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
57.1 83.8 125.6 152.3 191.7 207.1 256.3 238.2 186.6 148.8 81.2 40.7 ၁၇၆၉.၄
၂၀၁၂-ခုနှစ် နွေဦးတွင် "Yellow Bastion" (Žuta tabija) ရှုမြော်စခန်းမှ မြင်ရသော ဆာရာယေဗိုမြို့ မြင်ကွင်းကျယ်တစ်ခု
Benbassa၊ Esther; Attias၊ Jean-Christophe (2004)။ The Jews and their Future: A Conversation on Judaism and Jewish Identities။ London: Zed Books။ p. 27။ ISBN 978-1-84277-391-8။ Sarajevo.
Visit Sarajevo: A Brief History of the City။ Visit Sarajevo။ 23 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wayback Machine (2015-09-06)။
Toe၊ Rodolfo။ "Census Results Highlight Impact of Bosnian War"၊ Balkan Transitional Justice၊ Balkan Investigative Reporting Network၊ 1 July 2016။ 14 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sarajevo: The economic, administrative, cultural and educational center of Bosnia and Herzegovina။ Mediterranea News (12 May 2011)။ 24 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
daenet d.o.o.။ Sarajevo Official Web Site : Economy။ Sarajevo.ba။5April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Malcolm၊ Noel (1996)။ Bosnia: A Short History [Paperback]။ London: NYU Press။ pp. 107, 364။ ISBN 978-0-8147-5561-7။
Agency၊ Anadolu။ Saraybosna'da 476 yıldır yaşayan medrese! (Sarajevo Celebrates 476 Years of its Medresa!)။ Haber7။ 11 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Weather and Climate: The Climate of Sarajevo (in Russian)။ Weather and Climate (Погода и климат)။ May 16, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 25, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sarajevo Climate Normals 1961–1990။ National Oceanic and Atmospheric Administration။ August 25, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။